Zvakanaka kuva pamba mushure mekushanda kwezuva rakaoma uye kutaurirana nevanhu avo mu roulette vhidhiyo kutaura avo vakanaka uye vanoda kukurukura chero nyaya. Asi zvinoitika zvakare kuti haudi kunyatsoda kutaurirana nemunhu. Uyezve sei kubvisa muenzi? Kana kuti ungatanga sei kukurukurirana? Uye kupedza sei? Uye zvakajairika, kupi kwekuwana yakakodzera vapamhi? Yese iyi nemimwe mibvunzo mizhinji inogona kupindurwa neK Chat Roulette. Chat roulette ndeye chakakosha chinyorwa chakagadzirwa kuitira kuti vanhu vakwanise kutaurirana pasina matambudziko. Zvekuti munhu wese ave nemukana wekusarudza waanoda naye kuti ataure uye kuti iwe unogona kutaura uye kupedza hurukuro kana paine chimwe chinhu chisingafarire. Muzviitiko zvese izvi uye zvimwe zvakawanda, hurukuro yekutaurirana inogona kuuya inobatsira. Iri ibasa rakakurumbira zvekuti vanhu pasi rese vanga vachirishandisa kwemakore akati wandei. Chatroulette iri kuwedzera simba zuva rega rega. Mamirioni evarume nevakadzi, vakomana nevasikana vanoenda kune ichi chinhu uye vanotaurirana. Ivo vanotaurirana nekuda kwemafaro, nekuda kwekuwana ruzivo rwekukurukurirana, kuitira musangano, nekuda kwekutsvaga shamwari uye mweya yavo varoora. Uye zvinofadza. Enda kune saiti uye chat inogona zvachose chero munhu. Kune, hongu, kurambidzwa, asi nezvavo mushure menguva pfupi. Iye zvino ngatitarisei zvakadzama mikana yeiyi online roulette yekukurukurirana.
Saka, Chat Roulette ine yayo chaiyo mirau uye zvisingabvumirwe. Pakazara, iyi mitemo iri nyore uye zvinokwanisika kutevedzera kwayo. Asi ngationei mitemo yekutanga. Saka hezvinoi:
zera zvinorambidzwa. Vashanyi vekutaura vanofanirwa kunge vaine makore gumi nemasere.
Iwe haugone kukurukura chero chinhu muhurukuro chinorambidzwa nemutemo.
Zvebonde mabasa hazvigone kupihwa.
, zvese zvinoenderana nehugandanga hazvigone kukurudzirwa.
iwe haugone kutuka iyo inoparadzira chero chikonzero: jenda, dzinza, zvido, etc.
Mukutungamira, iyi ndiyo mitemo yakakosha kwazvo iyo inofanirwa kuteedzerwa pasina kukundikana. Mukuwedzera, zvinodikanwa kuti titaure zvine hunyoro uye tigamuchire interlocutor sezvaari. Chatroulette inoedza yese kuti ive nechokwadi chekuti vashanyi vanonzwa vane chivimbo uye vakasununguka mune chero mamiriro ezvinhu. Kune izvi, iyo shoma mitemo yakagadzirwa iyo inoita kuti hupenyu muhurukuro hukwane kune vese vashandisi veichi chinoshamisa chigadzirwa. Kana iwe uchitevedzera iyi mitemo, saka kutaurirana kuchave kunofadza. Uye ivo vanopindira vanozogutsikana uye vopa kutaurazve imwe nguva. Kana iyo mitemo ikasateedzerwa uye zvichemo kubva kune vamwe vashandisi zvinogamuchirwa, saka iyo account yomushandi iyo inogamuchira zvichemo uye anotyora mitemo yekutaura inogona kuvharwa. Chero ani wega Chat roulette mushandisi anogona kutumirwa kune banza kana akatyora mitemo inofanirwa kucherechedzwa.Kuti uende kune iyo hurukuro pachayo uye kutanga kutaurirana, iwe uchada zvinotevera:
kombiyuta kana runhare
Uye iwe unogona kutaurirana, sezvavanotaura, pasina mabhureki. Unogona kuita chero chinhu chipi zvacho: kuseka, kuseka, kupokana, uye kazhinji unakirwe pamwe chete nevanhu avo vawakafarira. Izvi ndizvo zvinokwezva Chat Roulette chirongwa. Pano iwe unogona kutaurirana chete nevanhu avo vanonyanya kunakidza uye waunoda kutaurirana mberi. Kubatsira kwekushandisa Chat roulette ndeyekuti iwe haudi zvakawandisa kuti ubate. Ingo komputa kana foni yakakodzera neInternet. Ehe, ndichiri kuda maikorofoni. Uye pano zviri nani kurega kuponesa. Mushure mezvose, maikorofoni yemhando yepamusoro inopa mukana wakanaka kwazvo wekunzwa zvakanaka uye unounza pfungwa dzako kune yako inoparadzira izwi rinonakidza uye rinosimbisa, pasina kupindira uye zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa mukurumbira maikorofoni mhando.
Kukurukurirana pawebhu yekukurukurirana roulette saiti nguva dzose kunounza mufaro nechikonzero chekuti mushandisi wega wega weji ino ane mukana wakakura wekusarudza. Asi pakati pezvinofanira kusarudza, ngatitarisei. Saka, sarudzo inogona kuitwa:
97 007 pakati pemutero wekutaurirana: unobhadharwa uye mahara
Pakati pezvakajairika kutaurirana uye Premium maitiro
Kusarudzwa kwevanopindira kunogona kubhadharwa kana kusununguka. Izvi zvichaiswa pasi mune chaiyo sosi iyo mushandisi anosarudza chaizvo kuti kutaurirana. Pane zvimwe zviwanikwa vanobvumidzwa kusarudza bonde remusiji wemahara pasina muripo, asi pane zvimwe ivo havabvumidzwe. Naizvozvo, pano iwe unofanirwa kutarisa nemirairo uye mune yekutaura menyu roulette.
Kusarudzwa pakati pezvakabhadharwa uye zvemahara maficha zviri pachena. Mune chero Chat roulette, unogona kusarudza chero yakabhadharwa kana yemahara kutaurirana chirongwa. Chinhu chikuru pano ndechokutarisa idzo sarudzo dzakapihwa mune dzipi zvadzo.
Kusarudzwa pakati pekutaurirana mune yakajairika modhi uye muPrimum mode inopawo kune mumwe nemumwe mushandisi. Chimiro chakajairwa chinowanzo kupihwa mahara. Asi for Premium iwe unofanirwa kubhadhara. Mutengo unogonesawo kuchinja uye kuchinja nekufamba kwenguva.
Saka pane sarudzo. Uye mushandisi wega wega anozvisarudzira uyu. Pane zvimwe zviwanikwa zverudzi urwu, zvinopihwa zvakare kusarudza kwete chete hukama hwekutaurirana, asi nyika ine vagari vayo vandinoda kutaura navo. Zvakare pane mamwe mawebhusaiti iwe unogona kunyange kusarudza basa kana kuti zvaunofarira wemufambisi wako, pamwe nezera uye zvimwe zvimwe paramita. Chero sosi inodzora sarudzo iyi mukufunga kwayo. Naizvozvo, uyu mubvunzo unofanirwa kujekeswa usati wanyoresa pane zvekushandisa uye sarudza kutaurirana online neinternet interlocutor.Ivo vanoratidzika kuburikidza neruzivo. Maitiro emushandisi uye mitemo inodudza iwo mazwi avo. Iko hakuna kwakawanda kurambidzwa kumasayiti ezvino, asi zviripo. Semuenzaniso, kurambidzwa kwezera. Zera remushandisi harifanirwe kunge riri pasi pemakore gumi nemasere.
Mushandisi haafanire kushandisa online chat roulette senzvimbo yekushambadzira kana senzvimbo spam. Izvi zvinorambidzwa nemirairo pane dzakawanda zviwanikwa izvi. Izvi zvinonzwisisika. Mushure mezvose, vanhu vanouya pano kuti vataure, uye kwete kuti vatarise kushambadzira kana kugovera spam.
Pane zvakawanda zviwanikwa zvakadaro, zvichiri kurambidzwa kuvhara webcam kuitira kuti zvisazivikanwa kuti ndiani ari kutaura newe. Chiso chemuyananisi chinofanira kugara chichiwoneka. Asi mune dzimwe nguva iwe unogona kutaurirana kwete newebhu kamera, asi kuburikidza nekutaura uye kuenderana.
Iyo yemazuva ano yekukurukurirana inogona kushanyirwa nenzira iyo inobatsira kune mushanyi. Unogona kushandisa chat pane yabhadharwa kana yemahara vhezheni. Kana uchisarudza vhezheni yakasununguka, unogona kutaurirana zviri nyore nemunhu chero upi zvake. Iwe unogona zvakare nekunyatso shandura pane, kubva uye nekubvisa kana chimwe chinhu chikatadza. Asi mamwe ma parameter uye zvakanakira zvichiri zvishoma paunoshanyira iyi chat for free.
Kushanya kwakabhadharwa kunopa mimwe mikana kune wese mushanyi. Paid maitiro anotendera iwe kushanyira nzvimbo isingazivikanwe mune mamwe ma roulette ekutaura. Kukurukurirana kusingazivikanwe kunogona kugadzirwa zvakananga kuitira kuti vashandisi vasashambadze kutaridzika kwavo pane ino pfuma. Inogona kugadzirwa zvakasiyana. Uye nevavariro dzakasiyana. Nekushanya kwakabhadharwa, dzimwe sarudzo dzinoshanda. Semuenzaniso, iyo sarudzo yekugadzira yaunofarira vaparadziri. Anoshanda chaizvo. Mushure mezvose, zvinozivikanwa kuti chat roulette inopa sarudzo yevasinga verengeki vanopindira. Asi dzimwe nguva mupanduri anonakidzwa zvekuti ndinoda kuramba ndichitaurirana naye mune ramangwana. Chinhu chakabhadharwa sarudzo chinoita kuti uwedzere vaunofarira vaunopindira kuchinyorwa cheavo iwe chaunogona kuenderera nekutaurirana chero nguva.
Uye zvakare, kana uchibhadhara zvekutaurirana, pane mumwe mukana: kutaurirana wakasununguka. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona chete kutaurirana nemunhu chaiwo uye woita izvi kwenguva yakareba. Kana iwe uchida hurukuro, iwe unogona kuenderera mberi gare gare.
Basa re "dema" rinowanikwa mune dzese dzakabhadharwa uye dzemahara. Izvi zvinofambisa zvikuru muitiro wekutaura mese mu chat mode uye mumavhidhiyo maitiro.
Kubatsira kukuru kwechikamu chakabhadharwa imhaka yekuti munhu anogashira kodzero dzakawedzerwa. Asi pane zvese, kana ukasarudza kutaurirana wakasununguka, hapana anozotadza mukutaura. Pane kupesana, maitiro ekutaurirana pachezvawo haatambure zvishoma kana akasununguka.Semuenzaniso, kugona kusarudza vhidhiyo kutaura uye kutaura. Ehe, chero mushandisi, kunyangwe akabhadhara kana akasununguka kuwana zviwanikwa, anogona kusarudza mashandisiro aachaita hurukuro. Uye ipa wako anogadzirisa nzira iyi seizvi. Kukurukurirana kana kutaura mumafirimu vhidhiyo kunogona kutungamira vashandisi kushamwari nyowani kana vanhu vakanaka chete avo vanonyatso kuwedzera maitiro matsva uye zviitiko zvitsva.
Asi kunze kwekutaurirana kunonakidza uye zvinoshamisa interlocriers, chat roulette inogona kuzara nemamwe matambudziko. Semuenzaniso, njodzi. Ivo vanouya ku roulette yekukurukurirana kwenguva yekutanga inowira munyika yevasina kujairana uye mikana. Uye ikozvino ngatione kuti chii chaunofanira kutarisisa paunenge uchitaurirana uye chii chaunofanirwa kugara uchigadzirira:
Chekutanga pane zvese, Chat roulette inosanganisira kukurumidza uye nyore shanduko yevanokurukurirana. Izvi zvinoreva kuti unogona kushandura kune unotevera munhu kana abata bhatani. Zvinofadza. Asi panguva imwe chete, zvakakodzera kuyeuka kuti iwe unogona zvakare nekukurumidza kuchinjaniswa kune imwe interlocutor. Naizvozvo, izvi zvakangofanirwa kuve zvakagadzirirwa.
Mukutaura kusingazivikanwe, hapana anoziva chero munhu. Iwe unogona kuuya nemazita matsva, surnames, nzvimbo yekugara. Iwe unogona kushandisa chero mutauro wekutaurirana, kunyange paine roulette chats dzakagadzirirwa zvakananga kune mutauro mumwe. Semuenzaniso, Chirungu. Kana Russian. Mazhinji emasevhisi aya akagadzirirwa mitauro yakasiyana zvachose. Naizvozvo, pano unogona kutamba zvakachengeteka basa remutorwa.
chat roulette inosanganisira kunyanya varaidzo, kwete yakakomba kudanana. Naizvozvo, usatarise pfuma iyi zvakanyanya. Ichi chinonyanya basa rekuvaraidza, ndosaka rave rakakurumbira. Uye usatarise pano kune vanozivana zvakakomba kuti uenderere mberi. Kunyangwe paine zvakasiyana. Kunyanya kana iwe ukasarudza iyo inozivikanwa sevhisi mudunhu rako kana kunyange guta.
dating yemahara inokwezva vakawanda scammers vanoda kuwana purofiti kubva kune vanovimbika vashandisi. Kunyangwe iyo yekuchengetedza service ichigara ichiita uye kupindura nekukurumidza kune yazvino Chatroulette, mukana wekusangana ne scammer uchiri wakakura chose.
Pamusoro pehunyengeri, kune mamwe marudzi ese evanhu vanogona kuratidza vasina kupfeka muviri. Iyo inorangwa nechirambidzo, asi iwe unogona achiri kusangana nehunhu hwakadai. Mune ino kesi, unogona kungonyora kunyunyuta kana kudzvanya bhatani rakakodzera.
Chat Roulette nhasi inokwezva nhamba huru yevanhu. Zvinofadza, asi kune rimwe divi, mukana wekusangana zvisina kukwana hunhu unowedzera. Kutungamira kwemajee anoshanda uye majee akasiyana siyana kuri kuitawo mukurumbira. Semuenzaniso, prankers vakasarudza chat roulette kare kare. Uye chishandise kuitira kuti uve mukurumbira.Nzira yekuziva sei prankster kana uchitaura paAnti-Chat kana chero imwe chat chat? Kubva panguva yekutanga zvinogona kuve zvakaoma, asi zvakadaro zvinokwanisika kuzviita. Heano mamwe matanho ekuona prankers:
Nguo dzisina kujairika dzinogona kupa kunze ma prankers. Sezvo mutemo, ivo vanogadzira vhidhiyo yekunakidzwa uye vanonyatsogadzirira iyo. Zvipfeko zvavo zvinotoita zvetsika uye zvisina kujairika. Zvipfeko zvinofanirwa kutyaira iyo inopinda mukati meiyo stupor kanenge kubva kune yekutanga yechipiri yekutaurirana. Naizvozvo, kana iwe uine interlocutor pamberi pako mune mask kana mune yakarongedzeka zvipfeko, saka izvi zvinogona kuve pranker. Uye chete ndiwe unogona kusarudza kuti kutaurirana naye mberi here kana kuti kwete kutsvaga mumwe munhu.
majee anonyorwa kunakidzwa uye nekuda kwekuzivikanwa. Pranker inogona kuva nehasha kana, pane kudaro, yakanakisa. Iye anogona kuita chimwe chinhu chinopesana zvinowanzogamuchirwa chinogamuchirwa maitiro emafambiro.
chinangwa chavo ndechekunyora manzwiro uye maitiro kune maitiro avo. Ivo vanoedza izvi uye vanoedza nzira dzakasiyana siyana. Asi musiyano wavo mukuru kubva kune vakajairwa vanopindirana inyaya yekuti vari kuita chimwe chinhu chinofanirwa kukonzera manzwiro akasimba muvanopindira: kushamisika, kutsamwa, kuseka, kunyara uye mamwe manzwiro akasimba.
Chat roulette inzira yemazuva ano yekutaurirana kwevanhu vemazuva ano. Kana iwe usina nguva yekubuda kuenda kuvanhu, kana uchinyara kutaura nevamwe vanhu, kana iwe usingazive nzira yekutaura kuti kwete kumutengesi, ipapo roulette yekukurukurirana ichava nzvimbo yakanaka yekudzidzira. Pano iwe unogona kudzidza kutanga kukurukurirana nevasingazive zvachose. Pano iwe unogona kutaurirana zviri nyore nevaya vaifarira. Uye imbomira kutaura nevaya vasingade. Chinhu chikuru ndechekuzvibata sevanhu panguva imwe chete, kuve unonakidza kukurukura uye yeuka kuti kune rumwe rutivi rwechidziro vanhu zvakare. Ndiani auya kuChongororo roulette kuitira kuti unakidzwe newe uye utaure nezvese zvepanyika.